China High strength low alloy steel plate စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
အမျိုးအစား- သံမဏိပြား Tags: 150M28, 523M15, 527A19, A209-T1, A210-A-1, A213-T11, A214-C, A334-8, A335-P9, A53, အလွိုင်းဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သံမဏိပြား, ကာဗွန်သံမဏိပြား၊ သံမဏိပြား၊ ဟော့လိပ်စတီးပြား၊ အလွိုင်းသံမဏိပြား၊ အလတ်စား အထူသံမဏိပြား
နိဒါန်း Low-alloy high-strength steel သည် low-alloy engineering structural steel ကို ရည်ညွှန်းပြီး သတ္တုစပ်ဒြပ်စင် အနည်းငယ်ကို ကာဗွန်နည်းသော သံမဏိတွင် ပေါင်းထည့်ကာ လှိမ့်ထားသော သို့မဟုတ် ပုံမှန်အခြေအနေ၏ အထွက်နှုန်းအား 275MPa ထက် ကျော်လွန်စေရန်။low-alloy high-strength steel ၏ သတ္တုစပ်ခြင်းမူအရ သံမဏိ၏ ခိုင်ခံ့မှုကို တိုးမြင့်ရန်အတွက် သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များမှ ထုတ်လုပ်သော သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များမှ ထွက်ရှိသော ခိုင်မာသော ထုထည်အားကောင်းစေရန်၊ သတ္တုစပ်ဒြပ်စင်များဖြင့် မိုးရေခံအားကောင်းစေရန် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သံမဏိ၏ တောင့်တင်းမှုနှင့် ကြွပ်ဆတ်သော အသွင်ကူးပြောင်းမှု အပူချိန်ကို လျှော့ချရန် အားကောင်းစေခြင်း သံမဏိကို ထေမိရန် သံမဏိအား အားကောင်းစေခြင်း အလယ်အလတ် ကာဗွန်နိုက်ထရိတ်၏ မိုးရွာသွန်းမှုအား အားကောင်းစေခြင်း၏ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ သံမဏိ၏ တောင့်တင်းမှုနှင့် ကြွပ်ဆတ်သော အသွင်ကူးပြောင်းမှု အပူချိန်ကို တိုးစေပြီး၊ ၎င်းသည် သံမဏိအား မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုကို ရရှိစေပြီး အနိမ့်ပိုင်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေပါသည်။ အပူချိန်ဂုဏ်သတ္တိများ။Low-alloy high-strength steel ၏ စွမ်းဆောင်ရည် လက္ခဏာများကို အောက်ပါ ကဏ္ဍနှစ်ခုတွင် အဓိက ထင်ရှားစေသည်- 1. အထွက်နှုန်း ကန့်သတ်ချက် နှင့် ကောင်းမွန်သော ပလတ်စတစ် နှင့် ခိုင်ခံ့မှု။2. ကောင်းမွန်သောဂဟေဆက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လေထုချေးခုခံ။
လျှောက်လွှာ အလွိုင်းမြင့် သံမဏိပြားများ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်- ကုန်ထုတ်စက်ရုံများ၊ အထွေထွေ အဆောက်အဦများနှင့် တွင်းတူးကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ဂေါ်ပြားများ၊ လျှပ်စစ်ဘီးအမှိုက်ပုံးများ၊ သတ္တုတွင်းသုံး ထရပ်ကားများ၊ တူးဖော်သည့် ထရပ်ကားများ၊ ထရပ်ကားများ၊ မိုင်းတွင်းများတွင် အသုံးပြုသည့် ဘူဒိုဇာများနှင့် အင်ဂျင်နီယာမျိုးစုံ ဆောက်လုပ်ရေးများ၊ စက်မှုလေမှုတ်ကိရိယာများ၊ ကရိန်းအမျိုးမျိုး၊ ကျောက်မီးသွေးတွင်း ဟိုက်ဒရောလစ် ပံ့ပိုးမှုများနှင့် အခြားစက်ကိရိယာများနှင့် အခြားဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ။
ကုန်ပစ္စည်းများ လက်ခံရရှိသည် ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်ကျေနပ်ပါသည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော ပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီး၊ ပိုကောင်းအောင် အမြဲကြိုးစားအားထုတ်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ယခင်- လိပ်ထားသော စတီးပြား
Low Alloy High Strength Steel Plate ၊
Low Alloy High Strength Steel Plate စက်ရုံ